Maxkamadda ICJ oo Aqbashay dalabkii Soomaaliya ee Dacwadii Badda ee Soomaaliya Iyo Kenya | SAHAN ONLINE
Maxkamadda ICJ oo Aqbashay dalabkii Soomaaliya ee Dacwadii Badda ee Soomaaliya Iyo Kenya
Maxkamadda caalamiga ee caddaaladda ayaa go’aan kasoo saartay dacwadii badda ee u dhaxaysay dowladaha Kiiniya iyo Soomaaliya ,waxayna Maxkamadu aqbashay dalabkii Soomaaliya inay qaado dacwadaas.
Maxkamadda caalamiga ee caddaaladda ayaa ku tilmaantay heshiiskii Is-afgarashada ahaa ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya mid sharci ah.
Maxkamadda ayaa dacwada u fariisatay galabta saacadu markey ahayd 15:00 xiliga Soomaaliya ,waxayna diiday dalabkii Kenya ee ahaa in aysan Maxkamadu gelin dacwadda ee labada dal mar kale wada hadlaan iyada oo la tixraacayo heshiiskii Is-faham ee sanadkii 2009.
Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sanadihii 2014 iyo 2015 u gudbisay Dacwadda maxkamadda ,halka Kenya ay ku doodeysay in labada dal u baahan yihiin in ay iyagu kawada hadlaan muranka Badda iyadoo la tixraacayo heshiiskii Is-afahan.
Dowladda Kenya ayaa maxkamadda caddaaladda u gudbisay in aysan xaq u lahayn in ay quad dacwadda ilia labada dal wada hadlayaan.
Maxkamadda Caddaaladda ayaa go’aamisay in heshiiskii Is-fahan uu yahay mid shaqeynaya marka loo eego sharciga caalamiga ah,waxayna ugu danbeyn go’aamisay dalabkii Xukuumadda Soomaaliya ee ahaa in dacwada Badda ay quad maxkamadda caalamiga ee caddaaladda ee magaalada Hegue ee dalkaas Hollan.
Go’aanka kasoo baxay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ayaa guul u ah dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.